UAbhigayil Shapiro uhamba zePics kunye neTape yeTyala leSondo yeVidiyo yeVidiyo - Iphonografi Yoosaziwayo
UAbhigayil Shapiro uhamba zePics kunye neTape yeTyala leSondo yeVidiyo yeVidiyo
Jonga i-slut enye embi, imvumi ye-opera u-Abigail Shapiro ohamba zeesuti kwiifoto ezivuzayo kunye ne-tape yasekhaya yabucala kwi-iCloud yakhe. Siqokelele yonke imifanekiso ka-Abigail Shapiro ehamba ze evele kwi-intanethi!
UAbhigali sisizathu esaziwayo UBen Shapiro , umntakwabo odume njengegqwetha, umhlalutyi wezopolitiko waseMelika kunye nesithethi esidlangalaleni. Wayengoyena mlobi mncinci kumazantsi e-United States eneminyaka eli-17 ubudala. UAbhigali yimvumi yeopera, owaziwa ngokudlala kakuhle kunye namabali amakhulu amangalisayo awayehlala ehlekisa ngabaphulaphuli bakhe! Ethetha ngemidlalo yakhe, wadlala indima yenqununu kwi-Opera Theatre ye-MSM. Ngapha koko, usebenze kwiManhattan Summer Voice Festival, iZiko lobuGcisa beVocal yaMazwe ngaMazwe, i-Opera Maine. Kwaye kutshanje, iAspen Music Festival. Ngelishwa, uAbhigali waba nodumo ngenxa yeebhokhwe zakhe ezinkulu kwaye bavezwa kwi-intanethi ukuqala konyaka we-2020!
UAbhigayil Shapiro iteyiphu yesondo
Okokuqala, siya kukubonisa u-Abigail Shapiro ongamanyala, okanye kungcono ukuthi uthi iteyiphu ecacileyo yesini! Ubonwa ejija iqhude ekuqaleni, enika isandla esihle endodeni erekhoda ividiyo… Emva koko wakhupha amabele akhe phezulu kwaye siyabona amabele amangalisayo. Ngeengono ezinkulu zangaphambi kwale ndoda… Uyazichukumisa, uyazikhamisa kwaye sonke siyakubona okulandelayo. Isihogo esinye somsebenzi we-tit, apho lo mfo uya kuba nzima kulo mfazi…
Yeyiphi ividiyo, efanelekileyo ukuncedisa eyethu oovimba abagcina imifanekiso engamanyala … Cofa nje umdlalo ukuze ube lilungu lethu!
UAbhigayil Shapiro uhambile imifanekiso
Ndicinga ukuba asikaze sibe negalari enkulu kangaka enemifanekiso engaphezulu kwamashumi amathandathu evuzayo yomntu omnye ukuba asibali oonongogo abakhulu babo bonke oosaziwayo, uJennifer Lawrence noKate Upton… Ewe, le 2020 iqale ngcono kunaye nabani na olindelweyo, noAbigail Shapiro ehamba ze kwaye iifoto ezishushu avuza! Le opera slut mhlawumbi inezakhono ezikhethekileyo zokugcuma nokukhwaza eqongeni, kwaye njengoko sele sibonile kwiteyiphu yesondo evela phezulu, yenye yezona zibalaseleyo!
Kodwa ngoku lixesha lokuba ugxile ku-Abigail Shapiro ehamba ze, ubhontsi wakhe ochetyiweyo, kunye ne-esile elincinci. Ndidwelise le kuba kukho izinto malunga noAbhigali ekufuneka sijonge kuqala. Ubeka amabele emvelo amaninzi kangangokuba ndiyazibuza ukuba loluphi uhlobo olubangela oku. Ndiyazibuza nokuba kutheni ubuso bakhe bunezothe kangaka. Imibuzo emininzi, kunye nemifanekiso emininzi engaphendula. Ukuba sithetha ngobufazi bakhe uqinile kodwa ujongeka ngathi yinto endingasoze ndiyikhothe. Zigwebe, lixesha lokuba ndikushiye kunye no-Abigail Shapiro ovuza ii-nudes!
Iifayile ze-simone zihamba ze
U-maria fernanda galvão uhamba ze